सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशि भयका मानिस !! | सुदुरपश्चिम खबर
ज्योतिषशा’स्त्रका अनुसार हरेक मानिसको व्यक्तित्व उनीहरुको राशि अनुसार फरक फरक हुने गर्दछ। कयौँ ज्योतिषशा’त्रका अनुसार तपाई जति आधुनिक भएपनि यस कुरालाई नकार्न सकिदैन् की राशि अनुसार मानिसको ग्र’ह र नक्षत्रमा गहिरो प्र’भाव पर्ने गर्दछ। राशिले व्यक्तिसँग जोडिएका कयौँ आदतका बारेमा बताउने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई केही राशिका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जुन राशिका व्यक्ति निकै क’न्जूस हुने गर्दछ
मेष राशिका व्यक्ति अरुका सामु झु’टो सान देखाउनेमा विश्वास गर्दैनन्। यिनीहरु फाल्तुमा पैसा खर्च गर्नु ब’कवास हुने सोच राख्दछन्। मेष राशिका व्यक्ति निकै मेहनती हुने गर्दछन् र यिनीहरु आफ्नो मेहनतको कमाई सोचविचार गरेर मात्र खर्च गर्ने गर्दछन्।
कर्कट राशिका व्यक्ति अधिक ख’र्चालु हुँदैनन् र मेहनत गरेको कमाएको पैसा संचय गर्नु पर्ने सोच राख्ने गर्दछन्। यिनीहरु फा’ल्तु खर्च गर्दा आफूले मेहनत गरेको सम्झने गर्दछन्। यस राशिका मानिस निकै समझदार हुने गर्दछन् र पैसा खर्च गर्ने मामिलामा सोच विचार गरेर मात्र गर्ने गर्दछन्। यिनीहरु जीवनमा क’न्जूस गर्ने गर्दछन् र पैसा बचत गरेर राख्ने गर्दछन्।
ज्योतिषशा’स्त्रका अनुसार कन्या राशिका मानिस सबैभन्दा बढी क’न्जूस हुने गर्दछन्। फा’ल्तु मात्र हैन आफ्नो आवश्यकतामा खर्च गर्न पनि यिनीहरु लो’भ गर्ने गर्दछन्। कन्या राशिका मानिस ल’जालु स्वभावका हुने गर्दछन्। तर पनि यिनीहरु भित्र अनजानमा क’न्जूसको भावना पैदा हुने गर्दछ।
सामान्य लाइफमा धेरै भरोसा गर्ने वृश्चिक राशिका व्यक्तिको स्वभाव हुने गर्दछ। साथै कम पैसा खर्च गर्ने यिनीहरुको स्वभाव हुने गर्दछ। यिनीहरु आफै पैसा खर्च गर्दैनन् र परिवार तथा पार्टनरले पैसा खर्च गर्दा रि’साउने गर्दछन्। (gnewsnepal.com बाट सभार)
नेपाललाई १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने चिनियाँ राष्ट्रपतिको घोषणा !!